Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့် (434-05-9) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Methenolone အမှုန့်စီးရီး / Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်
SKU: 434-05-9. Categories: Methenolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Methenolone Acetat ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Primobolan) အမှုန့် (434-05-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 174-175.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate (Primobolan) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Methenolone Acetate အမှုန့် Primobolan အမှုန့် (CAS 434-05-9), Primo တစ်ဦးက, Primo Ace ကိုအဖြစ်ကိုသိလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Primobolan အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Methenolone Acetate အမှုန့် injuected ရပါမည်။ အထီးအဘို့, အစပြုသူများသောအားဖြင့်တစ်နေ့တစ်နေ့ကအဆိုပါအလယ်အလတ်အသုံးပြုသူအများအားဖြင့် take50-100mg 100-150mg ယူသည်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူအများအားဖြင့်အမျိုးသမီး, များသောအားဖြင့် 150-200mg သို့မဟုတ်6အဘို့, တစ်ရက် 8-25 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပို 50-50mg ယူ , 75-4 ရက်သတ္တပတ်ထက်မပိုတဲ့ day.And -6mg
ကုန်ကြမ်း Primobolan အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
တစ်ဦးပျော့ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း, Methenolone Acetate အမှုန့်များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားကောင်းတဲ့, ဆိုးရွားသောအန်ဒရိုဂျင်တုံ့ပြန်မှုပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဝက်ခြံများပါဝင်သည်, အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်ကြီးထွားဖို့ predisposed ရှိသူများအတွက်ဆံပင်ကျွတ်အရှိန်။
ဒါ့အပြင် LDL လက်စထရောအတွက်တိုးနဲ့တူလက်စထရောကိစ္စများ, အထူးသဖြင့် HDL လက်စထရောဖိနှိပ်မှုသို့မဟုတ်လျှော့ချရေးတို့ပါဝင်သည်။
ကဖိနှိပ်မှု၏ Methenolone Acetate အမှုန့် (CAS 434-05-9) နှုန်းသည်အများအပြားဟို steroids ထက်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ရှိသမျှဟိုစတီရွိုက်ကိုသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်။
ဆေးပညာလယ်ကွင်းအတွင်း, Methenolone Acetate အမှုန့်ကြွက်သားပိန်နှင့်ပြင်းထန်သောကိုယ်အလေးချိန်တစ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရသောအခြေအနေများခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောအသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်: တစ်ဦးကူးစက်မှုတိုက်ခိုက်နေတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အ immunostimulant, အခြေအနေများဖြုန်း, အချိန်ကြာမြင့်စွာ corticosteroid ကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတန်ပြန်ရန်တွဲဖက်လျက်, အရိုးပွရောဂါ၏ကုသမှုအဖြစ် sarcopenia (အိုမင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းအဖြစ်ကြွက်သားများဆုံးရှုံးမှု) ။ ဒါကြောင့်လည်းနေမကောင်းသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်အဆိပ်မဆိုလက္ခဏာများမပါဘဲမွေးဖွားအချိန်မတန်မီမွေးကင်းစအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကလေးများအဖြစ်မွေးကင်းစအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ကြောင်းယင်း၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအတွက်ဒါအပျော့စားဖြစ်သက်သေပြချက်အဖြစ် Anavar တူသော Methenolone Acetate အမှုန့်,  ။ မဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလွန်နည်းနည်းနှင့်အတူအားနည်းအန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုထားပါတယ်တဲ့ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အတိုင်းဤဟို Steroid တစ်မျိုး၏သှေးဆောငျ, အားကစားနှင့်ကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းကနေကြွလာဘယ်မှာတစ်ခုမှာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့်စျေးကွက်
, Methenolone Acetate အမှုန့် (CAS 434-05-9) ဝယ်ဖို့ AASraw ထံမှ Primobolan အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
AASraw ပါးစပ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Methenolone Acetate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Methenolone Acetate အမှုန့်ရော် Powder ချက်ပြုတ်နည်း
Primobolan အမှုန့် - ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း Steroid တစ်မျိုး
အမြိုးသမီးမြား Primobolan (Methenolone Acetate) ယူလို့ရပါသလား?
Primo (Methenolone Acetate) အမျိုးသမီးများအတွက်အလုံခြုံဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုး၏တဦးတည်း
Primobolan Steroid တစ်မျိုးသံသရာဖြတ်တောက်အတွက်အများဆုံးအသုံးများဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်